थुप्रै देश मिश्रित खोपको रणनीतिमा, फरक - फरक खोपबारे जान्नैपर्ने कुरा :
श्रावन ०५, २०७८ १२:०५ मा प्रकाशित
विश्वका ११० भन्दा बढी देशहरुमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरियन्ट फैलिसकेको अवस्थामा धेरै देशहरुले बुस्टर डोजका रुपमा फरक फरक कोरोना खोप लगाइरहेका छन् ।
भिन्न भिन्नै खोप भन्नाले नियामक निकायले पहिलो खोपको निर्माण प्रक्रिया एउटा र दोस्रो खोपको निर्माण प्रक्रिया फरक भन्ने वुझ्नु पर्दछ । यसरी एउटै व्यक्तिलाई पहिलो र दोस्रो खोप फरक फरक लगाइंदा खोपको प्रभावकारीता झनै बढ्ने बताइएको छ । धेरै अध्ययनहरु फरक - फरक खोपको प्रभावकारीताबारे अनुसन्धानकै क्रममा छन् ।
स्पेन र बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले एउटै किसिमको खोप लगाएकाको भन्दा दुई थरी खोप लगाएका व्यक्तिहरुमा रोग प्रतिरोध क्षमता बढेको देखिएको सार्वजनिक भएको छ । जर्मनीमा तेस्रो चरणमा गरिएको अध्ययनले पनि पहिलो र दोस्रो डोज, एष्ट्रजेनेका र फाइजर खोप लगाएका व्यक्तिहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएको देखायो ।
कुन कुन देशले फरक फरक खोप लगाउनपर्ने नीतिलाई अगाडि बढाए ?
बहराइन, भुटान, क्यानाडा, इटाली दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्सहित विश्वका थुप्रै देशहरु मिश्रित खोप रणनीतिमा अघि बढिसकेका छन् । सुरुमा, जनवरी जतिबेला खोपको आपूर्ति निकै कम थियो इंग्लयाण्डमा त्यो समय केहीले मिश्रित खोप लगाएका थिए ।
सोही महिना अमेरिकामा पनि फरक फरक खोप लगाउन सुझाव दिएको खवरहरु बाहिर आए । मार्चमा धेरै देशहरुले एष्ट्रेजेनेकाको खोपले रगत जम्ने समस्या देखिएको भन्दै केही देशहरुले खोप अभियान नै रोके । त्यही बेला अरु थुपैं देशका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पहिलो र दोस्रो डोज खोप फरक फरक लगाउन अनुमति दिइयो ।
सापाइन्जा यूनिभर्सिटि रोमका संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डा. ग्लोरिया तालियनीले विगतमा अरु रोगहरु विरुद्ध पनि फरक फरक खोप लगाइएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले अन्य रोगको उपचारका क्रममा थरी थरीका खोपको प्रयोग गरेका थियौं र हामीले यसबारे वास्ता गरेनौ कि पहिलो एउटा खोप लगाएका छौ र बुस्टरका रुपमा दोस्रो अर्काे लगाउदैछौ भनेर हामीले त्यतिबेला ख्याल गरेका थिएनौं ।’
तालियनीले सूचीत गर्नुभयो कि केही जिज्ञासाहरु पक्कै थिए जतिबेला एमआरएनएको भ्याक्सिन संक्रामक रोगविरुद्ध प्रयोग गर्यौं त्यतिबेला मिश्रित खोपले खतरा निम्त्याउँछ भन्ने कुरा कही आएन । खोपको जैविक कारणले फरक फरक खोप लगाउँदा हानी गर्छ भन्ने पुष्टि अहिलेसम्म नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
धेरै देशका शीर्ष नेताहरुले समेत फरक -फरक खोप लगाइसकेका छन् । जर्मनका चान्सलर ६६ वर्षकी एन्जेला मर्केलले पहिलो मात्रा एष्ट्रेजेनेका र दोस्रो मात्रा मोर्डनाको खोप लगाउनु भएको थियो । इटालीका प्रधानमन्त्री ७३ वर्षका मारियो द्रगीले पनि पहिलो एष्ट्रेजेनेका र दोस्रो फाइजरको खोप लगाउनुभयो ।